Hackett Oo Ka Hadlay Maxamed Saalax Oo Laba Gool Ku Laag Xalay Dhaliyey Kulankii Liverpool Iyo Leeds United? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Hackett Oo Ka Hadlay Maxamed Saalax Oo Laba Gool Ku Laag Xalay Dhaliyey Kulankii Liverpool Iyo Leeds United?
Mohamed Salah ayaa dhaliyay laba gool ku laag iyadoo Reds ay bilawday difaacashada horyaalka Premier League guushii ay ka gaareen Leeds – laakiin garsoorahii hore Hackett ayaa sheegay in kii ugu horreeyay aysan aheyn in la siiyo.
Mohamed Salah ayaa tuuray laba rigoore si loo hubiyo in Liverpool ay 4-3 ku garaacday Leeds United – laakiin Keith Hackett ayaa sheegay in garsoore Michael Oliver uu sameeyay wicitaan khaldan kii ugu horeeyay.
Salah ayaa hogaanka u dhiibay kooxda Jurgen Klopp afar daqiiqo uun ka dib markii ay difaacdeen horyaalka Premier League ka dib markii Oliver uu ciqaabay Robin Koch kubbadda gacanta.
Laakiin khabiirka Sky Sport Jamie Carragher wuxuu xisaabiyay in rigoorada aan la bixin – garsoorahii hore ee Hackett oo la ixtiraamo ayaa ogolaaday daaficii hore ee Liverpool.
“Garsoorku wuxuu leeyahay hal muuqaal wuxuuna ku deg degay inuu bixiyo rigoore,” ayuu Hackett u sheegay Caught Offside “wuxuu ku sugnaa meel aad u wanaagsan oo leh xagal daawasho wanaagsan.”
Hackett ayaa sheegay in go’aanka uu ahaa mid khaldan sababtoo ah wuxuu rumeysan yahay in Koch uu isku dayayay inuu gacantiisa ka dhaqaajiyo kubada – iyo sababta oo ah waxay ka soo kacday jilibka daafaca.
“Waa go’aan shaqsi ahaaneed laakiin aniga aragtidayda natiijada way khaldanayd,” ayuu yiri 76-jirka.
“Aniga ahaan waxaan aaminsanahay in daafaca gacantiisa gacanta uusan u dhaqaaqin dhanka kubada – waxay ahayd shil.
“Kubaddu xaqiiqdii waxay garaacday jilibka daafaca ka hor inta aysan kor u soo kicin oo aysan ku dhicin garabka hoostiisa ee gacanta. Daafaca ayaa si cad isku dayay inuu gacantiisa ka laabto” Wuxuu yiri oo kale.
“Sharcigu wuxuu sheegayaa in aysan aheyn dambi marka kubadu taabato ciyaartoy gacmo / gacan si toos ah uga timaada ciyaartoyda madaxa ama jirka (oo ay ku jirto cagtu) xaaladaan.”
Sida laga soo xigtay IFAB – jirka xukuma sharciyada ciyaarta – “dambi ma ahan haddii kubaddu taabato gacanta / gacanta ciyaaryahanka … si toos ah uga timaad madaxa laacibka ama jirkiisa (oo ay ku jirto cagtu).”
Hackett wuxuu ku tilmaamay sharciga inuu yahay “sharci liita”, isagoo sheegay inuu abuuray kala duwanaansho u dhexeeya weerarka iyo difaaca ciyaartoyda.
Wuxuu yiri: “Sharciga dabcan wuxuu qaadanayaa aragti ka duwan hadii ay ahaan laheyd ciyaaryahan weerar ah hadafna uu si toos ah uga dhalan lahaa dhacdada ama uu ku dhufan lahaa gacanta / gacanta oo uu siin lahaa saaxiibkiis weerarka ah fursad uu ku dhalin karo goolal markaa qofka weerarka ah waa la ciqaabi doonaa .
“Kani waa sharci si saraaxad leh ula dhaqmaya difaacayaasha iyo kuwa weerarka soo qaaday si ka duwan. Aniga aragtidayda waa sharci xumo. ”
Liverpool ayaa guushu ku raacday ciyaarta iyada oo uu Saalax dhaliyay saddexley halka Virgil van Dijk uu rasaas ku tuuray madaxa.
Laakiin Reds waxaa si adag u raacay kooxda dhawaan soo dallacday ee Leeds, taasoo seddex jeer barbareysay ka hor inta uusan Salah rigooradii labaad ugu dambeyn ciyaarta sariirta dhigin labo daqiiqo markii ay dhammaatay.